के सुदूरपश्चिममा संक्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेकाे हाे? – Health Post Nepal
के सुदूरपश्चिममा संक्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेकाे हाे?
२०७७ वैशाख ११ गते १९:२३
सुदूरपश्चिममा सुरूवाती दिनमा देशमै सबैभन्दा बढी पाँचजना कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए।
सरकारले हतार–हतार सेती प्रादेशिक अस्पतालाई कोरोना संक्रमितको उपचार कक्ष तोक्यो। र, सबै जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भयो।
चैत १४ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका युएईबाट फर्किएका कैलालीका ३४ वर्षीय युवक, भारतबाट फर्किएका चैत २२ मा कोरोना पुष्टि भएका कैलालीकै अर्का युवक र चैत २२ मै कोरोना पुष्टि भएका कञ्चनपुरका ४१ वर्षीय पुरुष निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अब अस्पतालमा कोरोना संक्रमित दुई महिलाको मात्र उपचार भइरहेको छ।
चैत २२ मै कोरोना पुष्टि भएकी युएईबाट आएका पुरुषकी भाउजु ३४ वर्षीया र वैशाख १ गते कोरोना पोजेटिभ भेटिएकी लम्कीचुहा नगरपालिकाकी ६५ वर्षीया वृद्धाको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार उनीहरूको अवस्था सामान्य छ।
यस्तो छ कोरोना परीक्षणको अवस्था
प्रदेश सरकारले यतिबेला र्‍यापिड टेस्ट र पिसिआर (पोलिमर चेन रियाक्सन) मेसिनबाट कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। भारतलगायत अन्य देशबाट आएका मानिसको परीक्षणलाई प्रदेश सरकारले तीव्रता दिएको हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म ८ हजार २ सय ३ जनाको र्‍यापिड टेस्ट गरिएको छ। यस्तै, यो समाचार तयार पार्दासम्म २ हजार ६ सय ३६ जनाको स्वाब संकलन गरिएकोमा २ हजार ६ सय ३१ जनाको पिसिआर मेसिनबाट टेस्ट गरिएको छ। जसमा पाँचजनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको उनले बताए।
पछिल्लो समय नयाँ संक्रमित नभेटिएकाले प्रदेशमा अवस्था सामान्य बन्दै गएको उनले बताए।
‘बाहिरबाट आएका सबैको जाँच गनुपर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। तर, यहाँ आरडिटीको अभाव होला जस्तो छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई ७५ हजार आरडिटी प्राप्त भएको छ।
तर, यहाँ विदेशबाट आएका मानिसको संख्या एक लाखभन्दा बढी छ। आरडिटीको उपलब्धता भयो र सबैको परीक्षण र उपचार गर्न सकियो भने प्रदेशलाई ग्रीन जोन तोक्न सकिन्छ।’
यस्तै, डा. हेमराज जोशी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणउन्मुख रहेकाले धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। यसरी नै सावधानी अपनाए प्रदेशमा कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ।
यस्तो छ प्रदेश सरकारको आगामी रणनीति
प्रदेश सरकारले पनि पछिल्लो समय कोरोनाको परीक्षण र अन्य तयारीमा तीव्रता दिएको छ। सुरूमा सेती प्रादेशिक अस्पताललाई कोरोनाको उपचारका लागि तोके पनि अहिले प्रदेश सरकारले महाकालीको कञ्चनपुरमा र सेतीको धनगढीस्थित डिम्बर कार्यालयमा कोरोनाको अस्थायी अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ।
महेन्द्रनगरको अस्पताल निर्माणमा केही दिन लाग्ने भए पनि धनगढीको कोरोना अस्पताल अबको दुई दिनभित्रै तयार भइसक्ने सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी जानकारी दिए। उनले अहिले नयाँ कोरोना संक्रमित नदेखिएको र संक्रमितलाई पनि निको हुने क्रम बढेकाले चिकित्सकीय सामग्री पनि राम्रै रहेको बताए।
केन्द्र सरकारले ३३ जना चिकित्सक पठाएकाले अहिले प्रदेश सरकारलाई सहज भएको उनले बताए। ‘अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारको नीति हेरिरहेका छौं। लकडाउनलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने केन्द्र सरकारको नीति पछि नै तय गरिने छ,’ उनले भने।
धनगढीलाई ग्रीन जोन तोकिने भन्ने हल्ला छ नि? भन्ने हेल्थपोष्टनेपालको प्रश्नमा मन्त्री सुवेदीले अहिले नै त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय नभएको बताए। उनले नयाँ संक्रमित नदेखिए र बाहिरबाट आएका सबै मान्छेको स्वास्थ्य परीक्षण सकिए यो विषयमा सोच्न सकिने बताए।
जनताको साथले नै सुदूरपश्चिममा सरकारले कोरोनालाई थप फैलिनबाट रोक्न सकेको उनले बताए। कैलाली र कञ्चनपुरमा ७५ प्रतिशत किसानले बाली भित्र्याएको र पहाडी जिल्लामा अझै गहुँ पाकिनसकेको उनले जनाए।
विकास निर्माणका कामलाई भने गति दिने विषयमा प्रदेश सरकारले छलफल गरिरहेको सुवेदीले बताए। लकडाउनले अफ्ठ्यारोमा परेमा विपन्न जनताका लागि प्रतिपरिवार तीन हजार उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश सरकारले १६/१७ लाख विभिन्न स्थानीय तहमा पठाएको बताए।
के भन्छन् धनगढीका मेयर?
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वडले धनगढीलगायत सिंगो प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणउन्मुख अवस्थामा रहेको बताए। उनले अहिले कैलाली जिल्लामा दिनमा कम्तीमा एक हजार जनाको र्‍यापिड टेष्ट र स्वाव परीक्षण भइरहेको बताए।
उनले नयाँ मान्छे बाहिरबाट नआए र कोरोनाको उपचाररत दुई महिलालाई निको भएर घर फर्किए प्रदेशलाई ग्रीन जोनको रुपमा तोक्न सकिने बताए। उनले प्रदेशलाई ग्रीन जोनको रुपमा अगाडि बढाएर बाहिरबाट मान्छे नआउन दिने र भारतबाट जोडिएका सीमा नामा कडाइ गर्नुपर्ने बताए।